SIDA LOO DHIGO DABACASAHA BALAKOONKA XILLIGA JIILAALKA: WAXAA LAGU SAMEYN KARAA GURIGA IYO HEERKULKU WAA IN KHUDRADDA CAGAARAN LAGA DHIGO QOLKA DAYRTA - KHUDRADDA
Talooyin ku saabsan kaydinta karootada balakoonka xilliga jiilaalka: abuurista xaaladaha lagama maarmaanka ah
Kaydinta dabacasaha guryaha waa wax aad u adag, maxaa yeelay waxaa jira heerkul sare iyo hawo qalalan. Sidaa darteed, xididdadu waxay bilaabaan in ay Gagaashaan, oo ay ku daboolaan oo ay ku daboolaan caaryada.
Laakiin tani ma aha sababta ay u murugeysan tahay, tan iyo markii maqnaanshaha dhulka hoostiisa, beergooyska soo ururay dayrta waxay noqon kartaa balakoonka.
Qaababka qaabdhismeedka dalagyada xididka
Dalagyada dalaggu waxay u nugul yahiin inay ku dhuuntaan meelo farsamaysan. Awoodgan waxaa loo hayaa waqti ka dib goosashada. Madaxa, dhaawaca ayaa si fiican u roonaa haddii heerkulku yahay 20-25 digrii, qoyaanku waa 90-95%.
Dhismaha suberin wuxuu dardar galinayaa tilmaamayaasha heerkulka. Laakiin ka dibna xididdadu waxay bilaabaan inay dhalaan iyo xididdada ka baxaan. Haddii aad karootada ku kaydi heerkulkiisu yahay 10-14 digrii iyo qoyaan ah 90-95%, markaa nabaradu waxay ku dhamaanayaan 8-12 maalmood.
Digniin! Khudradda xididada yaryar iyo khudrada ah ayaa lagu kaydiyaa si ka xun kuwa dhexdhexaad ah iyo kuwo waaweyn.
Dalagyada caleemaha oo aan dhicin, kala duwanaanshaha kalyaha ayaa si dhakhso ah u dhaca, nafaqooyinka ayaa horayba u wada baabba'ay, difaaca jirkana si dhakhso ah lumay.
Kaydinta khudaarta balakoonka
Miyuu suurtogal ah in lagu kaydiyo khudaarta cagaaran ee guriga? Marka kaydinta khudaarta ee aqalka waxaa inta badan isticmaalaan balakoonka ama loggia. Doorashada habkan ilaalinta dalagga, waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanto habka heerkulka saxda ah, ha kululeynin oo ha jarin dalagga dalagga.
Dooro meel aan ka gaarin raajooyinka qorraxda, taas oo si xun u saameyneysa tayada khudaarta. Sababtaas awgeed, karootada way bedeshaa midabka, u cagaar cagaarsho oo qaado qandho qadhaadh ah.
Haddii dhammaan tallaabooyinka diyaarinta iyo xaaladaha kaydinta la arkay, ka dibna karootada waxay jiifsan kartaa balakoonka illaa 9 bilood. Laakiin tani waa mid dhexdhexaad ah, maxaa yeelay waxay sidoo kale ku xiran tahay habka loo doortay ee kaydinta.
Marka aad dooranaysid balakoonka kaydka xilliga qaboobaha, waa inaad u fiirsataa noocyada soo socda:
Boqoradda xilliga dayrta. Tani waa darajada ugu dheer, oo ay sameeyeen jinsiyado Ruush ah. Miisaanka hal miro waa 200 g, dhererkuna wuxuu gaaraa 25-30 cm, 120 maalmood ayaa ka soo baxa caleemaha ugu horreeya ilaa qaangaarka. Darajada ugu fiican waxay ku habboon tahay isticmaalka cusub iyo ilaalinta. Miraha waxay u kala duwanaanaysaa midabka, dhadhanka wanaagsan. Waxaad kaydsan kartaa ilaa bisha Juun. Waqtigaan, dharkooda ganacsiga iyo dhadhanka lama dhicin.
Flaccore. Tani waa noocyo kala duwan oo ah taranta Dutch. Bisaylka badeecadu wuxuu dhacaa 110-1130 maalmood ka dib markaad beerto. Midabka karootiga waa mid liin leh. Waxaa dheer, xitaa jidhka jilicsan. Kala duwan ayaa leh dhalidda sare, dhererka xididka 30 cm.
Caawin Faa'iidada ugu weyn ee noocyada kale ee tayo sare leh. Tayada ganacsiga waxaa la hayaa ilaa xagaaga soo socda.
Vita Long Tani waa kala duwanaansho cusub oo leh midho dhal ah. Xilliga sii kordhaya waa 140 maalmood. Waxaa lagu talinayaa nabadgelyada jiilaalka, maaddaama ay calaamad u tahay diiwaangelin aad u fiican. Waxaa loo isticmaali karaa cusub. Dalagga xididku wuxuu miisaankiisu yahay 200-300 g, dherer 30 cm.
Karlen. Kala duwanaansho sare, midhaha ay u bislaadaan 130 maalmood ka dib abuurka abuurka. Maaddaama dalagyada xididka ah laga helaa heerarka sare ee sonkorta, laguma talinayo dadka qaba sokorowga inay isticmaalaan. Karlena waa mid aan qabin daryeel, iyo haddii mikroclimate rabto waa la arkay, dalaggu wuxuu joogayaa ilaa guga.
Samson. Kala duwanaantan ayaa ah mid ka mid ah kuwa aan qabyo ahayn. Muddeynta dhirta waa 110-115 maalmood. Kajireyaal dhadhan fiican. Dhererka karootada waa 20 cm, miisaanka waa 160-200 g. Cudurka ayaa maqan, laakiin waxaa jira qadarin badan oo carotene ah, fiitamiin iyo walxaha raadadka ee saxarka. Kala duwanaantu waxay ku kori kartaa meelaha leh wax kasta oo bacrimin ah. Waxaad kaydin kartaa ilaa goosashada xigta.
Vitamin Kala duwanaanshahan ayaa si khaas ah loo heley kaydinta muddada dheer. Ripens 110 maalmood ka dib markii la beero. Dhererka miro waa 17cm. Daryeelka tayada leh iyo waraabinta joogtada ah, karootada waxaa lagu kala soocayaa casriyeynta sare iyo dhadhankiisa.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heerarka dabacasaha ku habboon kaydinta dheeraadka ah ee xilliga qaboobaha, waxaan halkan u sheegnay.
Beergooyinku si fiican ayaa loo haynayaa haddii la diyaariyo horay. Waxqabadyada diyaarinta waxay ka kooban tahay dhowr marxaladood:
Goynta. Waqti goosashada dabacasaha ayaa si toos ah ula xidhiidha noocyada kala duwan. Wixii kaydinta jiilaalka, waxaa fiican in la doorto noocyo dhexdhexaad ah iyo goor dambe. Goynta waxay dhacaysaa dhammaadka bisha Ogost ama bilowgii Sebtembar. Waa waqtigan in dhamaadka miisaan fir fircoon firfircoon ee dalagga xidid. Karootada dhulka ka soo bixi mayo, laakiin si tartiib ah ugu jiid meelo dushooda. Haddii ciidda ay aad u qalalan tahay, ka dibna wax yar ka qodo khudaarta leh majarafad.
Ka dib markii ay ka saareen dalagyada xididka dhulka, ka dhig qorrax 2-3 saacadood. Inta lagu jiro waqtigan waxay awoodi doonaan inay hawada iyo qalajiyaan.
Iska yaree dusha sare ee karootada. Ujeeddooyinkan, mindi fiiqan ama maqas waaweyn.
Digniin! Iska yaree dushooda, si aad u hesho koritaanka. Haddii xaaladan aan la daboolin, dalagga xididku wuxuu dhaqdhaqaaqi doonaa waqtigiisii ​​hore wuxuuna lumiyaa dhadhankiisa.
Nadiifi walxo kasta oo ka soo baxa wasakhda. Qalalan dalagyada dhulka hoostiisa iyo meel hagaagsan. Ha ku dhajin khudradda cagaarka si toos ah dhulka, taas awgeed, u dixiri filimka ama tarpaulin.
Kadib qalajinta, noocyada khudaarta cagaaran: yar yar si aad uga kala fogaato ballaadhan.
Ku dhaq khudaarta ka hor intaan lagu kaydin balakoonka ma aha mid u qalantaa, kaliya kala sooc dhulalka qalalan (wax badan oo ku saabsan tan, waxaan halkan u sheegay). Waxaad ku dhaqi kartaa oo kaliya haddii aad qorsheyneysid inaad ku kaydiso karootada qaboojiyaha.
Haddii beerta canab ah oo aan awoodin in la go'aamiyo taariikhda goosashada, ka dibna waa inuu taxadaraa dusha sare. Haddii caleemaha hoose ay noqdaan huruud iyo qallalan, markaa waa wakhtigii loo qaadan lahaa karootada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo diyaariyo dabacasaha xilliga qaboobaha, halkan ka akhri.
Maxay heerkulka u fiican tahay in la keydiyo khudaarta? Si aad u caleemo xidid ma Gagaashan, heerkulka waa in ay ahaataa 1-2 darajo. Hoos waxaa ah mid aan macquul ahayn, sida karootada barafoobay si dhakhso ah u sii xumaato oo lumiso fiitamiinada oo dhadhan.
Wixii kaydinta karootada ee jiilaalka ee guriga ayaa ku haboon oo kaliya balconi la daboolay iyo kululeyn. Inta lagu jiro dhaxan daran, waxaa laga yaabaa in uu jiro heerkul hooseeya, sidaas darteed khudradda waa in la sii kululeeyo. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu keydiyo karootada, mid kasta oo ka mid ah taas oo lagu gartaa sifooyin gaar ah.
Sanduuqa qoyan ee qoyan
Thanks to ciid, waxaad u haysan kartaa qoyaan lagama maarmaanka ah iyo heerkulka. Intaa waxaa dheer, waxay ka soocaysaa xidid kasta. Nidaamka waa sida soo socota:
Sanduuq weyn oo buuxa ciid.
Ka bixi xididada safafka, ixtiraamka u dhexeeya 2-3 cm u dhexeeya iyaga.
Isugeynta dhererka lakabyada aan ka badnayn 1 m.
Qoraalka. Ku dar 1-2% lime lakulay ama ash qoryo qulqulaya. Thanks to iyaga, formation of microflora pathogenic ayaa laga hortagayaa.
Peat waxaa lagu gartaa guryaha bactericidal iyo dabacsanaanta kuleylka. Iyada oo tayadaas darteed, peat waa qalab wanaagsan oo lagu keydiyo khudaarta.
Marka la dhigayo goosashada dabacdida ee sanduuqyada peat, waxaa suurtogal ah in ay sii hayaan illaa guga goor dambe. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo peat leh qiyaas hoose oo qallafsan (ka yar 15%). Guga waxaa loo isticmaali karaa bacrimin ah ubaxyo gudaha ah.
Wixii keydinta karootada ku habboon dhirta dhaadheer. Waxay ka kooban yihiin saliidyo muhiim ah iyo haraaga guryaha leh bakteeriyada. Hannaanka:
Diyaarso sanduuq weyn, lakabka lakab oo dhadhanka ah (dhumucdiisuna 2 cm).
On top of karootada jiifay saf ah iyo mar kale lakabka ah ee sida balka.
Sidoo kale, saar xididdada oo dhan ilaa sanduuqa la buuxiyo.
Waxaad isticmaali kartaa diirka basasha si wadajir ah. Waxay si fiican u ilaalinaysaa miraha beeraha.
In this article waxaan si faahfaahsan uga hadalnay meesha iyo sida aad u kaydin karootada xilliga qaboobaha ee guri, iyo halkan waxaad ka heli kartaa siyaabooyin la xaqiijiyey in lagu keydiyo karootada dhulka.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo xalkooda
Markaad xakameyso xididada ayaa lumisa difaacooda cudurka. Qaybta hoose ee dalagga xididku wuxuu bilaabmaa inuu si degdeg ah u dhajiyo. Si looga hortago dhibaatadan waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo dalagyada dabaylaha iyo qorraxda ka hor ama isla markiiba ka dib goosashada. Marka gaadiidka dib loo dhigo, ha ka nadiifin xididada yaryar bacaadka ah.
Waa muhiim! Karootiga ma istaagi karo xataa xakameyn yar. Ka dib marka la diiriyo, unugyada ay saameeyeen waxay luminayaan casiirkooda, waxay ku daboolaan xab qashin waxayna noqdaan xarun dhexdhexaad ah oo la yiraahdo microorganisms.
Sidaa daraadeed, barafka karootada ka hor goosashada ka hor iyo ka ilaali heerkulka inuu hoos udhaco 0 darajo inta lagu jiro kaydinta. Haddii aad ogtahay in aadan awoodin inaad ka saarto dabacasaha kahor imaanshada cimilada qaboobta, akhri maqaalkan, waxa aan ka wada hadalnay sidii aad u karin karootada beerta ilaa guga.
Iyadoo aan loo eegin sida dalaggu u kaydsan yahay balakoonka, Waa muhiim inaad raacdo xeerarka guud:
Xidid kasta waa in lagu dhejiyaa midba midka kale. Yar yartu waxay la kulmi doontaa midba midka kale, waxay u badantahay in uu faafo kallana.
Sanduuqyada leh dalagga, iyadoon loo eegin fiilaha, waa in si adag loo xiraa saqafyada. Laga soo bilaabo kore waxaa suurtogal ah in la dhigo buste diiran hore. Tani waxay abuuraysaa difaac dheeraad ah oo ka dhan ah dhaxan daran.
Wixii tayo sarre ah ee karootada ka hor-ku rushayn xal chalky iyo si qallalan ugu qallaji warqadda. Ka dib markaa, khudradda ayaa diyaar u ah kaydinta dheeraadka ah.
Karootada waxaa lagu kaydin karaa ma aha oo kaliya Maqsin, laakiin sidoo kale on balakoonka. Intaa waxaa dheer, habkani ma aha mid ka hooseeya kan ugu horreeya, waxay u fadhiisteen si wanaagsan si ay u diyaariyaan xididada oo ay u ilaaliyaan dhamaan shuruudaha dayactirka. Doorashada habboon, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso noocyada kala duwan ee dabacasaha iyo xaaladda cimilada ee gobolkaaga.